Kubatsira kweKutengeserana Kutaurirana kweBhizinesi Mutemo Makambani Dubai
Zvakanakisa zveKufambidzana Kwekutengeserana Kwebhizinesi
Muzviitiko zvakawanda mumhuri, kambani kana kusonganira vanhu vanowanzowira mukati makakava kana kutengeserana marimendi pane imwe nguva muhupenyu hwavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vazhinji vanhu vanozotsvaga kurairwa kwechikwata chavo chepamutemo nekuvabvumira kuti vatarisana nenyaya yacho. Kunyangwe iyo Kubvunzana inoperekedzwa nemutengo unodhura wepamutemo, inogona kutungamira kune mamwe mhedzisiro yakareba mazwi uye ndiyo iyo chikamu che kutengeserana pakutaurirana. Svikiro rinogona kugadzirisa matambudziko sekurova, mutsauko wezvematongerwo enyika muzvikoro zvakasiyana. Mune rudzi rwakagadzwa, kushambadzira kwekutengeserana kunobata nyaya dzine chekuvhiringidzira pazuva kwezuva mabasa.
Kusimudzira kunotendera mapato ese maviri kutaura kuburikidza nekusiyana kwavo mumamiriro ezvinhu anodzorwa nerubatsiro rwemasvikiro akadzidziswa uye nekuuya kumagumo ekubatsira. Kuti uve neakanakisa kwekushambadzira kwekutengesa iwe unofanirwa kuwana iro gweta rakanakisa kumiririra matambudziko ako uye unomhanyisa maitiro ese. Gweta rinofanirwa kubatsira nechinhu chero chipi chine chekudyidzana chingamuka, vashandi vakatsamwa pamwe nedzimwe gakava munyika yebhizinesi.
Gweta rakakura rinofanirwa kuve munhu ane hunyanzvi hunodiwa kuti abatsire mukugadzirisa nyaya dzakaomarara kukambani kana bhizinesi. Gweta rinofanirwa kuve nehunyanzvi hwebumbiro rebhizinesi kubatsira munhu kusarudza kuti angaumba kambani inoremedza dhodhi kana kambani. Izvo zvakakosha mukubatsira iwe kuronga bhizinesi rako uye zadza mapepa anodiwa anodiwa.
Gweta rinofanira kuva nezvibvumirano zvinomubatsira kunyatsonzwisisa bhizinesi rako. Anofanira kubuda nemhinduro uye matanho anodiwa ekutevera kuitira kuvandudza bhizinesi rako. Pamberi pekushambadzira kwekutengeserana, gweta rinofanirwa kugadzirira zvibvumirano zvemitemo zvinodiwa kune vatengi, vatengesi, uye vatengi kugadzirisa makakava kana ikamuka.
Gweta rinofanira kukubatsira kunyoresa masevhisi ako uye zvigadzirwa zvekudzivirira copyright kana zviratidzo zvehurumende izvo zvinodiwa pakugadzirisa gakava. Anofanirwawo kunyoresa kambani nhamba dzemitero yekuzivisa mutero, anzwisise mhedzisiro yemutero yerudzi rwebhizinesi raunobata kuitira kuti riise hwaro hwakakodzera hwemubvunzo wako. Gweta rinofanirwa kuve neruzivo rwezvivakwa rinogona kudiwa rakawanda zvakanaka rekudhinda uye masiginecha.
Mukudyidzana kwekutengeserana, iwe unofanirwa kusarudza nyanzvi ine ruzivo mukati kubata nyaya dzekutengesa. Anofanira kunge akabata nevamwe vatengi kuti vazive nzvimbo dzakasiyana siyana dzekufarira, kuitira kuti zvese zvirambe zvichiitika kana zvasvika pakubata nenyaya yepamutemo iripo kuti tirege kukanganisa. Gweta rakanaka bhizinesi rinobatsira bhizinesi rako kuti ribudirire uye ribatsire vashandirwi vako kuti vadzivise nyaya dzezvemitemo dzinogona kuita kuti munhu ave nematare edzimhosva kana kumhan'ara kutengeserana.
Zvimwe zvezvimwe zvakanaka zvekutsvaga kutengeserana kutaurirana kune rako bhizinesi zvinosanganisira:
Kutaurirana kwekudyidzana kuri kuita mutengo unoshanda
Kuremedza kutengeserana kwakanyanya kudhura zvakanyanya kana tichienzanisa nemutemo wedare. Asi, mutengo wekushambadzirana kwekutengeserana unotsamira pane zvimwe zvinhu senge zvinodiwa nevatengi, nzvimbo yenzvimbo, hunyanzvi, uye ruzivo rwakatorwa kubva kunzvimbo yavo yemutemo zvakasiyana. Mune zviri pamutemo
Muitiro wedare nemitengo yekutarisira yakakwira zvakanyanya zvichienzaniswa nekuregererwa. Nekudaro kuwanda kwekutengeserana kuri kwekudyira-mari uye matambudziko ako anogadziriswa nerunyararo nehunyanzvi.
Kurera pakati kunochengetedza nguva
Kufunga maitiro akaomesesa edare, zvinotora nguva yakareba dare risati ratura mutongo wezvematambudziko mukambani. Kune huwandu hwakawedzera hweakawanda emhuri uye makambani kukakavara mumatare nhasi anoramba asina kugadziriswa kwemakumi emakore. Nguva yekumirira mukushambadzira kwekutengeserana ishoma kwazvo, paine mukana wakakura kwazvo wekuuya muchibvumirano cherunyararo. Iyo yekutengeserana yekumiririra inotsigira chibvumirano chinoshanda uye chinogara kwenguva refu.
Iyo inogadzira hukama hwakareba
Kunyangwe iri kugadzirisa yemhuri, yekubasa kana kupokana kwevanhu kuburikidza nedare maitiro, maitiro anogara achipedza kukanganisa hukama pakati pemapato maviri. Izvi zvinodaro nekuti bato rega rega rine maonero avo akasiyana uye mhedzisiro yedare inogona kufarira rimwe divi, nekudaro zvichikonzera kukakavara kukuru pakati pavo. Asi mumabhizimusi ekuyananisa ekutengeserana, mapato ese ari maviri ane mukana wekutaura zvichemo zvavo nenzira inoremekedzeka uye zvakare zvinoreva kuti pane mikana yekuchengetedza hukama kana kugadzira imwe, kana nyaya yacho yagadziriswa. Iyo inopa mukana wekuchengetedza chero kunaka kubva pakati pemapato maviri.
Iyo yekutengeserana yekumiriri yekuitisa inoitwa nenzira yekukurumidza uye inoshanduka sezvo mapato anogona kuzvisarudzira pachavo pamunhu kuti aite senge murevereri, uye zvakare nzvimbo yekureverera. Nekugona kusarudza, mapato anogona kusarudza munhu ane nyanzvi ruzivo nezve nyaya yekubatwa. Nemhando yehushamwari yematanho ekutengesa maitiro, yakagadzirirwa kusimudzira nekusimudzira hukama kuti mapato maviri aya abatsirwe. Kazhinji, kutengeserana kwekuenzanisa kunokonzeresa kuparara kushoma kune hukama hwebato. Maitiro acho ane chakavanzika kune vese mapato.
Kureverera kutengeserana kwebhizinesi kunokurumidza, kwehupfumi, kwakazvimiririra uye kuchinjika, kunogona kutungamira kuchirungu pfungwa uye nekugadzira nzira dzekugadzirisa gakava, mapato anochengeta danho rakakura rekubatanidzwa zvakananga mumakakatanwa, nokudaro achitonga pamusoro pe nzira yavanogadzirisa matambudziko avo. uye mhedzisiro. Iyo inogona kurongeka mukati memazuva kana mavhiki zvichienderana nemaitiro, kutengeserana kwekutaurirana kunotemwa nehuwandu hweruzivo rwunosiyana kubva pane imwe nyaya ichienda kune imwe.
Kunzwisisa Kukwirwa Kwemhosva muDubai: Nei iwe uchida Gweta Rinokwidza Mhosva.
Maitiro Ekudyara zviri pamutemo muReal Estate seMumwe Munyika. Nongedzo Ekutenga Zvivakwa muDubai
Kuziva Kodzero dzako Dzepamutemo muBhizinesi: Commercial Litigation uye Dispute Resolution
Kushandiswa kweMitemo Yekunze uye Dhivhiti Kugadziriswa muAFA. Zvaunoda kuziva.
Kukosha kweZano reMutemo muZvibvumirano zvebhizinesi muDubai, UAE
Juanitah Ntambi Anokosha on Mhando dzeMhosva Dzemhosva Dzemhosva